Dorgommiin FA CUP Dhumachuutti Jirtii, Jimma,Oromiyaatti ammoo Dorgommii Kilaboota Manneen Barnootaatti Jiran
Guraandhalaa 17, 2015
Abder Herrera,Manchester Yunaaytid taphatutti Gurran.,16,2015 tapha FA CUP irratti Pirestonitti goolii galchee akkana gammada
FA CUP,maqaa dorogmmii UK keesstti guddoo beekamtu.Kilaboota English Premiere League 20n dabalee kilabootii English fi Wales keessaa 736 ganna tokkoof wal dorgoma.Kilaboota tana keessaa amma saddeetitti walti hafe.
Jartii walti hafe kun ammoo Bitootessa 7, 2015 walti debi’ee warri keessa dabre Caamsaa 30, 2015 istaadiyoomii Wembilee London jirutti waancaa taphata. Wembileeyiin kun nama kuma 90,000 qabata.
Warra dorgommii tanaa dabre keessaa tokkoo kilabii West Brom.West Brom ganna torbaan duubatti asi geette.Goolii lamaan gurbaa kialbiin tun Naayjeriyaa bitatte,Brown Ideye galcheefitti asiin gahe.
Birownii nama ganna 26 Paawondii miliyoona 10 bitatan.Goolii lamaan innii galchee waliin West Brom West Ham 4-0 moote.
Kilabooti saddeettan waltiu hafan saddeettan;Liverpool, Arsenal, Aston Villa, West Bromwich Albion,Bradford City, Blackburn Rovers,Reading, Preston North End/Manchester United.
Kilabiin barana dorgommii tana moote £1,800,000 ta lammeessoo baate ammoo £900,000 badhaasan.Walumattuu Paawondi UK Miliyoona 15 caalatti badhaasaan kennama.
Ayvori Kostiin dandeettii kubba amiilaatiin oli siixxee Afrikaa keessaa lammeessoo taate
Ayvori Kosti ta bara 2015 waliin Waancaa Afrikaa marroo lama moote.Sadarkaa amma isiin irra jirtu tana FIFA,Waldaa Federeshiinii Kubbaa Miilaatti kenneef.
Biyyoota Afrikaa 10n dandeettii kubbaa miilaatiin sadarkaa argatan
2. Ayvori Kosti
Biyyootii addunyaa dura jiran 10n:
Dorgommii Waancaa kubbaa Miilaa joollee gannii 20 gadii U20 ji’a sadiin duubatti jalqaban
Dorgommii biyyootii 24 irratti dorgoman tana Niiwu Zelaandi keessatti taphatan. Dorgommii tana Caamsaa 30 jalqabanii Waxabajjii 22, 2015 fixan.Biyya Afrikaa afran dorgommii tanaa dabran dorgommi Bitooteessa 8-22,2015 Senegaalitti taphatan irratti filuuf deeman.
Taphattootii kubbaa miilaa bebeekamoon yoo hedduu dorgommii akkanaa keessaa filaman.Gaanaa keessaa Michael Essen ka Argentiinaa ammoo Lionel Messi,Biraazil keessaa Ronaldinhon faatti filame.
Dorgommi ispoortii manneen barnootaa Oromiyaa Jimmatti itti jiran
Dorogommiin manneen barnootaa Oromiyaa ta amma Jimmatti itti jiran tun akka jecha obboo Addunyaa Barii,itit gaafatamaan biiroo dhimma dargaggoo fi ispoortii Oromiyaa jedhetti sadeessoo.
Dorogmoota Oromiyaa fulaa bu’anii dorgommii gara garaatii dorgoman keessaa filuuf qopheessan.
Dorogmii tana akka isiin saatii barnootaa irra hin buune tolchanii qopheessan jedhan. Barattoota godina 19 fi magaala kunryaa olii dhufanitti torbaan lamaaf irratti dorgomuutti jira.
Koloo Turee Ayvorii Kostitiif taphachuu ya dhiise
Koloon eegii kilabii Ayvori Kosti Waancaa Afrikaa bara 2015 mootee duubatti Ayvorii Kosti fulaa bu'ee tapchuu dhiise.Koloon nama ganna 33,ammallee kilabii Arsenal FC tapahta.Waacnaa Afirkaa marroo 6 taphate irratti gooli hedduu galchee lakkoofsa 4 keeyyattee dura taphata.
Akka karoora IAAF,Federeshiinii Waldaa Atileetiksi Adudnyaatti torbaan kanaa fi torbaan dhufaa keessaa dorgommii maratoonii hedduutti jira.Istookohoolmi Siwidin, Birmingham GB, Sevil Ispeein,Tokyoo, Jappaan fi Adelid Awustiraliyaatti qopheessan.
Dorgommii tana atileeota addunyaa bebeekamaa hedduutti irratti dorgoma.